Drive Ahead! 1.88 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.88 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ရှေ့ကိုမောင်း! တစ်ဦး gladiator ကားတိုကျပှဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုလ်သားပန်းကန်ပြားပျံမှနဂါးကုန်တင်ကားမှမော်တော်ကားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူသူတို့၏ခမောက်ခေါက်ဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုဖျက်ဆီး! ကားများနှင့်အဆင့်ဆင့်ရာပေါင်းများစွာသံခမောက်လုံး-crashing အရေးယူမှုနှင့်မထင်မှတ်သောယာဉ်မတော်တဆမှုများအဆုံးမဲ့နာရီကိုဆောင် ခဲ့. ,
သငျသညျရှေ့ Drive ကိုကစားနိုငျသညျ! လေးဂိမ်း Modes သာဖြစ်သည်။ ထိုစက်ကိရိယာပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကျော်ဒေသခံ multiplayer အတွက် Two-player ကိုပွဲစဉ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတိုက်ဖျက်! ဒိုင်နိုဆော, ဂြိုလ်သားများနှင့်စက်ရုပ် featuring အားကစားကွင်းမစ်ရှင် Explore! ဖျက်ဆီးဖို့မထိုက်တန်ကိုလျှော့ချနှင့်ဟေးလ်ဘုရင်အတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံ! ဂိမ်းအတွင်း၌ featuring မှာ, shot အဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံး Superstar စားသောက်ဆိုင်မှာအားကစားကွင်း replays Share! သငျသညျရှေ့လာမည့် Drive ကိုစူပါစတားဖြစ်လိမ့်မည် ?!
သင့်ရဲ့တိုက်ပွဲများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါသို့မဟုတ်အရူး matchups ဘို့ကျပန်းသွား! အကောင်းဆုံးသင်တစ်ဦးသွားလာရင်း-Kart နှင့်အတူတစ်နဂါးထရပ်ကားနိုင်သလား? ပုန်းခိုမကူညီလိမ့်မည် - ရုတ်တရက်သေဆုံး sawblades, မီးနှင့်ရေကြီးမှုများမိုဃ်းကိုရွာစေတတ်၏။ အဆိုပါသာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာရက်စက်ပြစ်မှု၏!
ကို virtual ခရက်ဒစ်စုဆောင်းနှငျ့သငျ play အဖြစ်ကားများနှင့်ရီနာကှငျး၏ဝန်၏တန်ချိန်သော့ဖွင့်ဖို့အ Prize ကိုစက်အတွက်သူတို့ကိုအသုံးချ!
ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျ com [dot] dodreams [မှာ] driveahead မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ် Facebook (https://www.facebook.com/DriveAheadGame) အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ http://dodreams.com/pdf/dodreams_policy.pdf: ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျရှေ့ Drive ကိုခံစားကြသလော rating ကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်ဤကဲ့သို့သောပိုပြီးပျော်စရာဂိမ်းပါစေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ!
apps-me စတိုး 53.59k 16.17M
APK ဗားရွင္း 1.88